BangEa – Soo dejin software ganacsi oo barnaamij ah
EA soo dejiso
Dib u dajin guddi
Soo celi bilowga
Dejinta dib u dhigista
Faa'iido & khasaare
Suuqa waqtiyeysan & Dalabka la sugayo
Suuqa & Dalabka Bixinta
Guud ahaan T/P
Guud ahaan S/L
Gudida xidhitaanka Hawlaha
KU dar Guddiga Dalabka
Meel Kudarka togan
Togan Kudar Luud x
Xadka Kordhinta togan
Gadaal ku dar meel bannaan
Gadaal ku dar Luud x
Xaalada ka rogmatay
Dib u celi Xadka Kudar
Gudi toos ah
Si otomaatig ah u fur oo xidh
Xir waqti cayiman
Hedg ugu dambeeyay
Hedg Astaanta Kale
Software-ka goobta oo dhan EA waa bilaash in la isticmaalo
EA waa soo gaabinta lataliyaha khabiirka ee nidaamka ganacsiga tooska ah ee caqliga leh.
Software-ka ganacsiga barnaamijka.
Xaqiiji in si toos ah looga ganacsanayo xagasha K-line
Tani waa su'aal uu soo saaray saaxiibkii ku sugnaa madasha EA BANG. Dhab ahaantii, shaqadan uma baahna in laga dhigo tilmaame, sababtoo ah EA hadda jira ayaa ogaan kara. Waxaa jira laba siyaabood oo tan lagu gaaro. Waa maxay jiirada k-line? Waa xariiq la sameeyay iyadoo la isku xirayo N […]
Farqiga u dhexeeya ganacsiga barnaamijka EA iyo qoraalka
EA: Mar kasta oo qiimuhu is beddelo, koodhka EA waa la fuliyay hal mar; Script: Kadib marka qoraalku socdo, koodhka waxa lafuliyaa hal mar oo kaliya. Si aan si sax ah u fahamno farqiga u dhexeeya, Mr. Tang of EA Bang wuxuu si gaar ah u qoray EA iyo qoraal si uu u muujiyo, shaqadeedu waa soo saarista waqtiga. […]
Hel cinwaanka IP-ga ee server-ka ganacsiga
Tani waa shuruud uu ku soo jeediyay saaxiib ku jira golaha EA State ka hor. Waxa uu isticmaalayay barnaamijkeena EA si uu si joogto ah uga ganacsado, istaraatijiyad ganacsiguna waa nooca cadayga. Dhammaanteen waan ognahay in xawliga wax kala iibsiga uu saameyn weyn ku leeyahay istiraatijiyadda wax kala iibsiga joogtada ah. Wuxuu inta badan adeegsadaa VPS […]
Iyadoo hal EA ay maamusho amarada EA kale, waxaad samayn kartaa tan.
Habka isticmaalka barnaamijka ganacsiga, miyaad la kulantay xaalad noocaas ah? Booska furitaanka ee aEA ayaa ka fiican, booska xidhitaanka ee beEA ayaa ka fiican. Way fiicnaan lahayd haddii labadan EAs la isku dari karo! Guud ahaan, waxaanu isticmaalnaa 1 EA si aanu u furno oo aanu u xidhno boosaska. Hadii aan rabo in aan wax ka qabto […]
Marka la eego feylka qaabeynta jaangooyooyinka ganacsiga barnaamijka, waa ku filan inaad akhrido maqaalkan
Sida loo isticmaalo faylka qaabeynta EA? Isticmaaluhu waxa uu u isticmaalayay Bang EA's Hedging EA ganacsiyo kala duwan. Hawlaha software EA si joogto ah ayaa loo kobciyaa. Sida wakhtigu sii socdo, waxaa jira boqolaal hawlo EA ah, markaa isticmaal kaliya shuruudaha guddiga tooska ah si aad u furto oo aad u xirto boosaska. Tusaale ahaan, waxaa jira qaar badan oo […]
Awaamiirta istiraatijiyadaha luminta nuqul ka noqoshada ma la isku halleyn karaa?
Intii lagu jiray 10-kii sano ee hore ee ganacsiga la isku dayay, istaraatijiyad ganacsi oo joogto ah ayaa samaysay khasaare joogto ah, iyo in habka, si adag loo fuliyay iyada oo loo eegayo istaraatijiyad ganacsi oo loo dejiyay. Suuqa mustaqbalka, suurtogalnimada khasaaruhu waa hubaal aad u sarreeya, sidoo kale waxay noqon kartaa khasaare. Haddii aan raacno istiraatiijiyadda ganacsiga ee […]
Ganacsiga EA wuxuu si toos ah u badbaadiyaa shaashadaha
Xusuusin: Maqaalkan waxaa laga soo wareejiyay www.eabang.com. Maqaalkani waa muuqaal uu duubay Mr. Tang. Kuwa aan jeclayn daawashada fiidiyowyada, waxaad akhrin kartaa maqaalka. Sidee si toos ah loogu qaadaa shaashadda marka EA ay furto oo ay xirto dalabaadka? Shaqadani waa codsi ka yimid xubin EA ah. Caadi ahaan waxa uu adeegsadaa macaamil ganacsi oo barnaamij ah. Waxa uu […]
Sidee loo fahmayaa faraqa u dhexeeya bar-maalmeedka iyo baaskiil-wadaha?
Farqiga u dhexeeya inta badan wuxuu ka yimaadaa qaabka bar ee xilliyo kala duwan. Sida ku cad shaxanka hoose, sida jaantuska 1-daqiiqo ah iyo jaantuska maalinlaha ah, khadadka K-badan ee jaantuska 1-daqiiqo ah ayaa laga yaabaa inay lahaadaan tiro yar oo TICKs ah. Inta lagu jiro muddada firfircoon ee noocyada qaar aan la jeclayn, 1-daqiiqo ee K-line wuu is beddelaa […]
Maxaan sameeyaa haddii EA aysan xirin amarada
1. Guji "Buy Open" ama "Iibka Furan" ee ku dhex jira guddiga furitaanka si aad u hubiso in uu jiro dalab la buuxiyay.Haddii uusan jirin amar cusub,Fadlan hubi in mt4 iyo mt5 ay soo galeen, iyo in "Algo Trading" iyo in kale. "Ogolow soo dejinta DLL" waa la shiday. EA rakibida 2. Haddii uu jiro amar cusub, amarrada aan xidhnayn lama maareeyo, Goobta [...]
Hedg calaamad kale
Shaqadan waxaa loo isticmaalaa calaamado badan. Ka dib markii guud ahaan T / P ee guddiga xidhitaanka la kiciyo, qadarka faa'iidada ay ku leedahay khasaaraha ay maamusho EA kan ugu badan, iyo inta la xidhi karo; Pofit>0:Faa'iidada labada dalab ee xayndaabku waxay ka badan tahay 0; Luminta akoontiga waa in>%: khasaare sabayn/Banlence>5%.
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 19
Forum mawduucyada ugu dambeeyay
Dejinta EA v3.8.8.4 soo dejiso oo cusboonaysii sharraxaadda shaqada
Halbeegyada calaamadaha badan, waxay socotay muddo 5 bilood ah, faa'iidaduna waa 50
Dejinta EA v3.8.8.3 soo dejiso oo cusboonaysii sharraxaadda shaqada
Guud ahaan goobta S/P ee xidhitaanka guddida
Dib u tijaabinta aad bay u gaabis tahay.
© 2022 BangEa. Lagu dhisay isticmaalka WordPress iyo Mawduuca ColibriWP .